Nkọwa n'etiti Geomedia na GvSIG - Geofumadas
Septemba, 2008 Geospatial - GIS, GvSIG
Ugbu a bụ nchịkọta nke ọrụ gosipụtarana II Days nke Free GIS, site na Juan Ramón Mesa Díaz na Jordi Rovira Jofre n'okpuru akwụkwọ akụkọ "Nkọwa nke GIS dabeere na koodu efu na azụmahịa GIS" Ọ bụ ihe atụ n'etiti GVSIG na Geomedia ngwaọrụ; ọ bụ ezie na ọ na-eme ya na-enweghị na-enye ndị ọzọ na-eme ka GVSIG sikwuo ike dịka ọ bụ SEXTANTE na mmezi ndị na-adịbeghị anya; Echere m na ọ bụ ọrụ ụbụrụ.
O bu ihe nwute na nke a, odi nkpa ka post a di ogologo ma tufuo uzo ya nwa oge, obu ezie na ichikota ya. Nwere ike ibudata ihe ngosi zuru ezu site n'ebe a.
Ọ bụ ezie na m ga-ekweta na n'ime ndenye ndị a bụ mgbe m na-atụ uche Dreamweaver maka ịchịkwa tebụl nke WordPress anaghị ekwe
Arụ ọrụ Resultados Nkwenye
Atụmatụ nhazi. Ntọala Ntọala: GIS abụọ ahụ nwere ike ịchọta ya, Geomedia Pro na-enye ohere ịtụgharị nlele map. Nchịkọta akụkọ: gvSIG abụghị Geomedia Pro, n'ihi na ọ naghị ejikọta njikọ njikọ ahụ, nke na-enye ohere oghere ndị dị na GIS nke ụlọ ọrụ dị ugbu a ka ha bụrụ ndị nwere onwe ha pụọ ​​na njikọ dị iche iche. Na-edezi n'ígwé: Anyị na-eme ka akara akara akara gvSIG, ụdị CAD, na ọnụ ọgụgụ buru ibu dị na Geomedia Pro. Ihe okike: gvSIG na Geomedia jikọtara na nke a, GIS abụọ ahụ na-ekwe ka ihe e kere eke dị mfe nke isiokwu dị iche iche ma ọ bụ n'usoro. Anyị na-enye otu ibu ahụ na mpaghara anọ (25% kwa mpaghara). Ihe njedebe bụ: Geomedia Pro dị ntakịrị elu karịa gvSIG na usoro nke isi ọrụ. Ngalaba ebe GvSIG si pụta bụ nke kachasị nta bụ njikwa akụkọ akụkọ ahụ, ihe kpatara ya bụ njigide ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe ka zoo ibu ọ bụla ma ọ bụ tinye njikọ njikọ njikọ dị na GIS, ebe ọ bụ na ntụle ahụ e kwuru n'elu na njikọ adịghị adị.
Ọdịdị nke Spatial Atụmatụ: E nwere ụzọ nyocha anọ dị iche iche nke nyocha: nyochagharị site na njiri mara, overlays, buffers, na ajụjụ topological. Na gvSIG anọ na Geomedia Pro, ha nwere ọrụ ha gosipụtara. Agbanyeghị, na gvSIG arụghị ọrụ ahụ n'ụzọ zuru ezu. Usoro: Site na onye onye ọrụ, Geomedia Pro dị mfe iji ọrụ dị iche iche nke nyocha nke ohere. Na otu ihuenyo, onye ọrụ ahụ kpebiri ụdị ụlọ ọrụ ọ chọrọ ka ya na ya rụọ ọrụ, nke njikọ ya ga-etinye na nke ga-eme ka nhazi. Na GVSIG, a na-echepụta nzapụta niile nke nchịkọta na faịlụ Shapefile, nke pụtara na iji jikọta nchịkọta dị iche iche dị iche iche, ọ dị mkpa iji mepụta faịlụ abụọ dị n'etiti nke na-ejighị ya. Nnyocha nke mbara igwe bụ otu n'ime ọrụ kachasị mkpa nke GIS mgbe ọ na-abịa n'ịbịaru ozi ruru eru, ma karịa ihe niile, ọ bụ ihe dị iche na GIS si CAD. Na nke a isi, anyị atụlewo ihe abụọ, ọrụ dị iche iche (60%) na-akwado site na GIS ọ bụla, na usoro (nha 40%) ma ọ bụ ihe eji eme ihe site na onye na-eji ọrụ iji nyochaa gbasara ohere. Raster ike: georeferencing, formats, nzacha na nhazi. Mkpebi: Na nkenke, Geomedia Pro na-apụta n'iche nyocha na na ụlọ ọrụ maka onye ọrụ. GVSIG bụ obere ngwaahịa, ọ ka ga-emeziwanye ụfọdụ ọrụ ya.
Raster ike Anyị enyochala echiche atọ dị iche iche na nke a: ọdịdị ọdịdị nke onyonyo (ihe dị ka 35%), nhụta nke orthophotos (ibu 35%); na, nzacha na nhazi nke onyonyo georeferenced (ibu 30%). Ịtụle ihe oyiyi: Ngwá ọrụ ahụ bụ otu ihe omimi na GIS abụọ ahụ, ma ọ bụrụ na ejighị n'aka na gvSIG, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọrụ ahụ mebiri na njehie, nke kpatara ya ka a nyochaa ala na gvSIG. Echiche anya nke Orthohoto: E gosipụtawo ụdị ụdị raster dịgasị iche iche nke Geomedia Pro na gvSIG. Nzacha na izizi: N'akụkụ a, gvSIG enwetawo nnukwu ekele maka mgbatị ya. Ọ na-enye gị ohere ịchọta data nchịkọta akụkọ (histograms) na ihe oyiyi, na ngwa nke nzacha dịka nkwụsị site nzọụkwụ ukwu. Nkwenye: GIS abụọ ahụ, ọbụna ihe dị iche bụ nkwụsi ike nke Geomedia Pro na-eji ngwá ọrụ georeferencing mee ihe, ebe gvSIG gosipụtara ike ndị dị elu n'iji nzacha na nkedo ekele maka mgbatị ya.
Njikọta N'akụkụ a, mmekọrịta nke GIS na isi mmalite data na-amụ, njikọta ọnụ bụ ezigbo ihe dị iche iche nke GIS. Anyị ga-enyocha akụkụ ahụ ma kesaa isi mmalite data ahụ na edemede anọ: usoro GIS, usoro CAD, ọdụ data na ụkpụrụ OGC.Ụdị SIG
Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Space Spatial / Locator, PostgreSQL / PostGIS
Mkpebi: Geomedia Pro, bụ GIS nke na-enye ọtụtụ mmekọrịta na ikike ya dị ukwuu ịgụ ma dee ihe dị iche iche na data (Microsoft Access, Oracle ...), na ike iji bubata data na usoro CAD dị ka DWG. GvSIG pụtara na njikere ya na-arụ ọrụ na ụkpụrụ OGC, yana ezigbo ịkọ ọdịnihu mgbe ọ na-abanye na nsonye Oracle dị ka nchekwa data tinyere PostgreSQL / PostGIS.
Ọrụ Iji nyochaa arụmọrụ, anyị chọrọ iji tụọ elu (ibu 30%), na-ejikwa ọsọ (ibu 30%), na njikarịcha nke nyocha algorithms gbasara oghere (ibu 40%). Na ihe mgbakasị, gvSIG dị ọsọ karịa Geomedia Pro. Nsonaazụ Geomedia meziwanye oge a tụrụ atụ site na 50%, naanị site na ịgbanwe usoro data sitere na Shapefile gaa Geomedia Smartstore. Na nha nke ọsọ njikwa anyị na-ebugharị ọtụtụ ozi sitere na otu oyi akwa gaa na nke ọzọ. GvSIG dị ngwa karịa Geomedia Pro. kachasị mma nke nyocha ihe gbasara mbara ala algorithms, Geomedia agbagharawo: nkwụsi ike ngwa ngwa na ọsọ. Na gvSIG, e nwere njehie nke ụlọ akwụkwọ JTS gị ma ọ bụ site na enweghị ike ị rụọ ọrụ na ụfọdụ. Nkwenye: gvSIG dị ngwa karịa Geomedia Pro, na-ese ma ọ bụ na-agagharị
data site na oyi akwa na nchekwa data, nnukwu akwụkwọ nke ozi. N'aka nke ọzọ, Geomedia Pro na-eguzosi ike ma na-agba ọsọ mgbe ọ na-eme nchọpụta gbasara mbara igwe, ya mere, ọ dị elu karịa gvSIG.
Nhazi nke SIG Anyị na-enyocha ajụjụ atọ dị iche iche n'ụwa nile: na GIS na-enye ohere ịhazi mmadụ, ụdị asụsụ ma ọ bụ edemede ọ ga - eme; na, akwụkwọ ndị dị ugbu a. GIS na-enye ohere ihe eji eme ihe? N'okwu abụọ, azịza ya dị mma: ee! Ụdị asụsụ ma ọ bụ ederede, gvSIG nwere ederede ederede (Jython) ma ị nwekwara ike ịmepụta ndọtị na Java site na klas gvSIG. Na Geomedia Pro, a na-emepụta ya na 6.0 na .Net na Visual Basic asụsụ, ya na ụlọ ọrụ ọhụụ ya iji mepụta iwu kwadoro, ma ọ bụ mmemme na mpụga SIG. Akwụkwọ, Geomedia Pro nwere ọtụtụ akwụkwọ ebe a na-akọwa ihe ọ bụla ma nwee ọtụtụ ihe atụ. Na gvSIG, akwụkwọ a adịchaghị ma na-emighị emi. Nkọwa nke akụrụngwa nke ọ bụla na ụlọ klaasị gvSIG na-efu, yana nkọwa zuru oke nke klaasị ndị dị mkpa. Nkwenye: Na GIS abụọ ahụ, a na-edozi ngwọta mmezi nke ọma. Na akwụkwọ gvSIG nyocha ahụ adịghị mma. Ọ dị mfe maka ọkachamara GIS onye nhazi ịhazi Geomedia Pro karịa gvSIG, n'ihi oghere dị na akwụkwọ gvSIG.
Ike 3D Anyị enyochawo ikike nhazi nke nhazi Z (ibu 40%), nnochite nke ókèala na 3D (ibu 30%); na, nnochi nke mpịakọta (ibu 30%). Mkpebi: Enweghị nke GIS abụọ ahụ nwere ohere dị ukwuu na ngalaba ndị a nyochachara, naanị Geomedia Pro na-apụta na njirimara abụọ: Njikwa Geocoding Z ma na-edebe ya mgbe ị na-ebupụ ụzọ ọzọ; na, o kwere omume, site na iwu nke otu ụlọ ọrụ na-abụghị nke Intergraph mere, iji mee ka extrọn nke polygons na volumetries na iji anya nke uche ha si na Google Earth ma ọ bụ iji rụọ ọrụ na Geomedia Terrain, ngwaahịa na-arụ ọrụ na arụmọrụ chọrọ. Na GVSIG, a ga-enwe ike ịnweta ya na nsụgharị mbipụta nke gvSIG 3D.
Maapụ Dika anyi gosiputala na ncheta nke oru ngo, uzo nke Map bu ihe kachasi eji eji GIS. Na nke a, anyị atụlewo njirimara (nha 50%) nke ngwá ọrụ na ncha (nha 50%) nke nsonaazụ. Usability: Na Geomedia Pro, ngwá ọrụ nkewa nwere ike ịmekwu ihe, ọ bụ ezie na usoro ịmepụta map dị mfe. Na GVSIG, anyị na-ahụ ngwá ọrụ dị mfe iji ma n'otu oge ahụ na-esiteghị na mmalite, obere mgbe a na-akwagharị ogwe ntụpọ nke map, ebe ọ bụ na ngosipụta ngwongwo efuola; n'aka nke ọzọ, ọ na-akwụ ụgwọ ọhụụ nke ọfụma ahụ kpọmkwem na PDF. Vistosity: Ma gvSIG ka Geomedia Pro, mere inweta onye ọrụ niile dị mkpa jikoro ịmepụta otu mara mma Map ngwaọrụ: edezi ike, customization, ohere nke na akara na ọnụ ọgụgụ Ogwe (formats: SVG na gvSIG na WMF na GeoMedia), edezi akụkọ . Nkwenye: GIS abụọ ahụ dịka ibe ha, na ngwaọrụ abụọ maka ịmepụta na idepụta map ndị ọkachamara.
Akwụkwọ na Nkwado Inweghi oke ma obu nkwado na-ezighi ezi nye onye ọrụ nwere ike ime ka onye ọrụ hapụ ma ọ bụ tụfuo iji GIS. Iji nyochaa ya, anyị kewara ya na ngalaba abụọ: akwụkwọ na nkwado, na-enwe oke nha iji nyocha ya n'ụwa nile. Akwụkwọ: N'ihe banyere Geomedia Pro, nyocha ahụ dị ezigbo mma, enwere akwụkwọ nke ụdị dị iche iche yana ihe atụ ndị dị mkpa, arụnyere yana Geomedia Pro. Na gvSIG eziokwu nke ịnwe ibudata akwụkwọ niile na-enweghị obere akwụkwọ arụnyere yana ngwá ọrụ na ịdị elu nke akwụkwọ mmepe na-amanye anyị ka anyị ghara iji isi okwu a dị ka o kwere mee. Nkwado: Ahụmịhe a na Degree Degree a na gvSIG bụ na, n'ime awa atọ, mgbe ị jụsịrị ajụjụ na ndepụta ndị ọrụ, azịza dị irè. Igosi nzọ nke gvSIG mere na listi ndị ọrụ. Na-egbochi na ọ dịghị oge onye ọrụ nwere mmetụta nke ịnọ naanị ya n'ihu ihe ọ bụla merenụ. Intergraph ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na-egbo mkpa nke ndị ọrụ ya gosipụtara nke ọma. Nkwado enyere Geomedia Pro ka emere na ụzọ atọ: Ebe Ọmụma Ihe Ọmụma, Online na Nkwado Ekwentị. Nkwenye: Na nkwado nyere onye ọrụ nke ngwá ọrụ ahụ, GIS abụọ ahụ bụ otu. Na akụkụ nke akwụkwọ Geomedia Pro na-aga n'ihu gvSIG, na àgwà na ihe atụ. Anyị na-atụle nnyefe nke akwụkwọ na Geomedia Pro mgbe ị wụnye ngwá ọrụ, ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ agawa njikọta weebụ iji nweta akwụkwọ niile dị mkpa dị ka gvSIG.
Ọnọdụ akụ na ụba Ego nke GIS ọ bụla (ikikere, ọzụzụ, mmezi, mmezi…) ka atụgharịrị, na-egosi mmefu akụ na ụba nke 'itinye akwụkwọ ikike n'oge afọ abụọ mbụ; na, nyochaa ma ọnụahịa ahụ na ngwaahịa ahụ. Mkpebi: Ọnụahịa nke Geomedia Pro dị elu karịa nke gvSIG, Otú ọ dị, Geomedia Pro bụ ngwaahịa siri nnọọ ike nke nwere ezi nkwado sitere na Intergraph. Azịza ya ga-abụ: abụọ GIS nwere ego ha na-efu.
Ụgwọ License 13.000-14.000 € 0 €
Udo ejizi akwụkwọ 2.250 € 0 €
Nkwado Nkwado Tinyere ego nkwụsị: nkwado ekwentị, ndepụta ndị ọrụ; na, ọ bụrụ na ikikere nke ikikere dị mkpa, na-arụ ọrụ na onye ọrụ ahịa. 0 €, usoro nkwado na-adabere na listi ndị ọrụ na mkpebi nke obi abụọ na-eme na 24-48h.
Ọzụzụ na-efu Awa 900 27 na 5 ụbọchị 300 € oge nke 20 awa.
Ọnụahịa nke nhazi 500 € -700 € mmadụ / ụbọchị 240 € - 320 € mmadụ / ụbọchị.
Na tebụl rịpụtara, anyị na-egosi nyocha nke akụkụ ọ bụla; na, ntule nyocha nke GIS ọ bụla; si na 1 gaa 5 ebe mbụ ọ bụ ezie na m sụgharịrị ya site na 0% gaa na 100%: 20% bụ nkwanye
40% ezughị oke, 60% zuru, 80% dị ịrịba ama; na, 100% bụ ihe magburu onwe ya. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na, n'ozuzu, gvSIG nwere mmasị na-akpali akpali ịghọ ezigbo ihe ọzọ, karịsịa ebe ọ bụ na ọ nwere atụmatụ nke mmepe-okwu oge a kọwara nke ọma.
Echere nke a Geomedia Pro gvSIG
Atụmatụ Nlekọta nke GIS 100% 80%
Ọdịdị nke Spatial 100% 80%
Raster ike 80% 80%
Njikọta na isi mmalite data 100% 80%
Ọrụ 80% 80%
Nhazi Ikike, akwukwọ ma ọ bụ asụsụ GIS 100% 60%
Ike 3D 40% 20%
Maapụ 100% 100%
Nkwado akwụkwọ 100% 80%
A ga-enyocha akụkụ akụ na ụba 100% 100%
GIS zuru ụwa ọnụ 100% 80%
Previous Post«Previous AutoDesk ga-egosi ihe kachasị mma nke RasterDesign
Next Post Ndị na-ewu ỤlọNext »
2 Azaghachi na "Nkọwa n'etiti Geomedia na GvSIG"
tvinternet08 kwuru, sị:
hello, ezigbo blog, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, tinye na weebụ m, ka ịdee comment.saludos.
argentina nchekwa data